Waa'ee haleellaa boombii Sambata darbee maal beekna? - BBC News Afaan Oromoo
Waa'ee haleellaa boombii Sambata darbee maal beekna?
Sambata Waxabajjii 16 hiriira Ministira muummee Abiy Ahimad deeggaruuf waamame irratti namoonni miliyoonotaan lakkaawaman argaman.
Hiriira deeggarsaa Dr. Abiyyi irratti hirmaatan kana irratti haleellaan boombii raawwatame.
Sagaleen dhukaasaa kan dhagaahame battala Ministirri Muummee haasaa isaanii xumuranitti ture.
Haleellaa boombii kanaan namoonni 2 du'aniiru, 156 miidhamaniiru, kanneen hospitaala seeenan keessaa sadi haala yaaddessaa keessa jiru.
Dhuka'uu boombii saniin booda haasaa taasisaniin Dr. Abiyy, ''Qaamoleen nageenya biyya keenyaa hin barbaanne haala qo'atameefi karoorfameen, ogummaa isaaniitti dhimma bahuun haleellaa kana raawwatan,'' jedhan.
Walitti qabaan koree hiriira deeggarsaa obbo Guddataa Galaalchaa gama isaaniin '' Poolisii Federaalaa, magaala Finfinnee fi Naannoo Oromiyaa waliin ta'uun waltaanee hojjechaa turre, wanti mudate garuu gama qaamolee tikaan qaawwi jiraachuu agarsiisa,'' jechuun BBC'tti dubbatan.
Balaan erga mudatee sa'aatii muraasa gidduutti, komishinarri ittaanaa poolisii Finfinnee Girmaa Kaasaa ibsa miidiyaa biyyaalessa ETV'f kennaniin ''qaamoleen nageenyaa hojiilee hedduu dalagneerra, haata'u malee qaamoleen haleellicha raawwatan haalaan waan qophaa'aniif haleellichi raawwateera,'' jedhan.
Turtii muraasa booda Obbo Girmaa dabalatee miseensonni poolisii Federaalaa fi Finfinnee 9 hojii isaanii irraa akka ari'atamanii fi qaawwa hojiirratti agarsiisaniif qorannoon irratti gaggeefamuuf to'annoo jala akka oolan dhagaahame.
Guyyuma sana poolisiin shakkamtoota 6 to'annoo jala oolchee qorannoo eegaleera.
Gareen qorannoo yakkaa Ameerikaa FBI adeemsa qorannoo deeggaruuf Finfinnee galuuniifi hanga ammaatti shakkamtootni 28 to'annoo jala ooluu Komishinarri poolisii Federalaa Zeynuu Jamaal BBC'tti himaniiru.
Namoonni shakkamanii qabaman mana murtiitti dhiyaatanii abbaan alangaaf yeroo qorannoo dabalataa guyyooti 14 kennamaniiru.
Maaltu jedhamaa jira?
Miseensonni poolisii hedduun haleella kana waliin wal qabatee hidhamuun isaanii poolisoonni gocha sana keessa harka qabaachuu malu shakkii jedhu kaaseera.
Komishinar Zayinuu Jamaal, poolisoonni harka keessaa qabaachuu dabalatee, eenyu haleellaa sana akka raawwateefi haleellaan sun enyurratti akka xiyyeeffate qorataa jirra jedhan.
Obbo Bitaw Balaay qabsaa'aa fi miseensa ADWUI duraanii, ''qopheessitootni qaamolee nageenyaa waliin haala eegamuun walta'anii kan itti galan natti hin fakkaatu'' jedhan.
Bakka tokko tokkotti laafinni sakkata'uu akka ture, kan bakka sana seenanii bulanis jiraachuun haalli eegumsaa laafuu agarsiisa jedhaniiru.
Nama alaa ilaaluuf wanti qindaa'aan akka hin turre wanti mul'isu jiras jedhu, eegumsi Ministira muummichaaf godhamu irrattis yaadni kennamuu akka malus dubbataniiru.
Walitti qabaan Koree Qindeessituu Hiriira deggersaa Obbo Guddataa Galaalchaa gama nageenyaatiin yeroon qophii taasisuu itti eegalle gabaabbatus, garuu qaamolee dhimmi ilaalu hunda waliin qindoomnee hojjenneerra jedhu.
"Poolisii Federaalaa, magaalaa Finfinnee fi kan naannoo Oromiyaa waliin marii bal'aa geggeessineetu hiriiricha eegalsiifne,'' jedhu
Goodayyaa suuraa Dhukaasa boombii Sanbata darbeen namoonni 28 shakkamanii to'annoo jala oolaniiru
Lakkoofsi namoota argamanii kan eegameen ol ta'uun tarii humna qaamolee nageenyaa guyyaa sanaaf ramadamanii ol ta'ee qaawwa uume yaadni jedhus jira.
Baay'inni ummataa balaa kanaaf rakkoo natti hin fakkaatu jedhu Obbo Guddataan
"Garuu sakatta'iinsarratti qaawwaatu ture, walabummaan waan tureef ummanni akka fedhetti gara aanga'oonni olaanoon taa'anitti dhiyaatee ture, isaan shakkuu dhabuutu kana fide'' jedhan.
Ummanni kumaa kitilaan walitti ba'e nageenyi isaa akkamiin eegamuun akka irra tureefi waanti ta'e hanqina qabaachuu ogeessi 'Peace and Security' Obbo Kumaa Baqqale BBCtti himaniiru.
Addunyaarratti biyyi jijjiirama barbaadde tolaan argatte hin jirtu kan jedhu Kumaan wayita jijjiiramaas ta'ee ce'umsaa dameen nageenyaa xiyyeeffannaan sakatta'amuu qaba jedha.
''Qaamoleen dhimma nageenyaarratti hojjetan amanamoo ta'uu qabu, faayidaa biyyaa kan giddu galeessa godhatan ta'uu qabu, kan garee tokkoo ykn kutaa hawaasa tokkoo qofaaf loogan ta'uu hin qaban'' jedha Kumaan.
Kana mirkaneessuun haala nageenya biyyattii yaaddoo keessaa baasuun hojii bu'uuraa ta'uu akka qabus dhaameera.
Abiy Ahimad: 'Nama ajjesuuf yaaluun mo'amudha, salphina'
23 Waxabajjii 2018